Malunga neFold Offline Ifolda (OSTIfayile
Ikhaya iimveliso DataNumen Exchange Recovery Malunga neFold Offline Ifolda (OSTIfayile
Xa i-Outlook isetyenziswa ngokudibeneyo neMicrosoft Exchange Server, ungayiseta isebenze kunye neBhokisi yemeyile yokuTshintsha ngaphandle kweintanethi. Ngelo xesha, i-Outlook iya kwenza ikopi yebhokisi yakho yeposi kwi-Exchange Server, ebizwa ngaphandle kweefayili, kwaye uyigcine kwifayile yasekhaya, ebizwa ifolda engaxhunyiwe kwi-intanethi ifayile kwaye ine.ost ulwandiso lwefayile. OST sisishunqulelo se "Itafile Yokugcina Engaxhunyiwe kwi-Intanethi"
Xa usebenza ngaphandle kweintanethi, unokwenza yonke into ngeefolda ezingaxhunyiwe kwi-intanethi ngokungathi yibhokisi yeposi kwiseva. Umzekelo, ungathumela ii-imeyile ezifakwe kwi-Outbox engaxhunyiwe kwi-intanethi, unokufumana imiyalezo emitsha evela kwezinye iibhokisi zeposi ezikwi-Intanethi, kwaye unokwenza utshintsho kwii-imeyile nakwezinye izinto njengoko ufuna. Nangona kunjalo, lonke olu tshintsho aluzukuboniswa kwibhokisi yakho yeposi kwiseva yoTshintshiselwano ude uqhagamshele kwinethiwekhi kwakhona kwaye ungqamanisa iifolda ezingaxhunyiwe kwi-intanethi neseva.
Ngexesha lenkqubo yolungelelwaniso, i-Outlook iya kuqhagamshela kwiseva yoTshintshiselwano ngenethiwekhi, ikope lonke utshintsho olwenziwe ukuze iifolda ezingaxhunyiwe kwi-intanethi ziya kufana nebhokisi yeposi kwakhona. Unokukhetha ukungqamanisa kuphela ifolda ethile, iqela leefolda, okanye zonke iifolda. Ifayile yelog iya kusetyenziselwa ukurekhoda lonke ulwazi olubalulekileyo malunga nokuvumelanisa, ukulungiselela isalathiso sakho kamva.
Ukusukela nge-Outlook 2003, iMicrosoft yazisa ngeMo yoTshintshiselwano efihliweyo, enyanisweni inguhlobo oluphuculweyo lweefolda ezingaxhunyiwe kwi-intanethi. Ibonakaliswe kwiinkqubo zokunxibelelanisa ezisebenza ngokukuko kunye nokusebenza okusebenzayo ngaphandle kweintanethi.
Iifolda ezisebenza ngaphandle kweintanethi okanye indlela yoTshintsho egciniweyo inezibonelelo ezininzi:
Yenza ukuba usebenze ngebhokisi yakho yeposi yokuTshintshiselana nokuba akukho nxibelelwano lwenethiwekhi olukhoyo.
Xa intlekele isenzeka kwiseva yoTshintshiselwano, njengokuphazamiseka kweseva, inkohliso yedatha yedatha, njl.njl. Ngelo xesha, ungasebenzisa DataNumen Exchange Recovery ukufumana kwakhona most yemixholo kwibhokisi yakho yeposi yokuTshintshiselana ngokuskena kunye nokuqhubekeka kwedatha kwifolda yendawo engaxhunyiwe kwi-intanethi.
Ifolda engaxhunyiwe kwi-intanethi (.ost) ifayile, njenge Ifayile zobuqu ze-Outlook (.pst), iqhele ukubekwa kwifolda echazwe kwangaphambili.
C: Igama leWindowsProfilesuserUseto lwendawoUkusetyenziswa kweDatha yeMicrosoftOutlook
C: AmaXwebhu kunye negama lomsebenzisiIzicwangciso zengingqiIsicelo sedathaMicrosoftOutlook
C: Amaxwebhu kunye neesetingi Igama lomsebenzisiApplication DataMicrosoftOutlook
KwiWindows XP, ifolda yile:
C: Igama lomsebenzisiAppDataLocalMicrosoftOutlook
KwiWindows Vista, ifolda yile:
C: Igama lomsebenzisi
YeWindows 7, ifolda yile:
Unokukhangela kwakhona ifayile "*.ost”Kwikhompyuter yakho ukuze ufumane indawo ekuyo ifayile.
The OST ifayile ikopi yendawo yakho yebhokisi yakho yeTshintshiselwano, equlathe yonke i-most iinkcukacha zonxibelelwano kunye nolwazi olubalulekileyo, kubandakanya ii-imeyile, iifolda, ipheosts, ukuqeshwa, izicelo zentlanganiso, abafowunelwa, uluhlu lokuhambisa, imisebenzi, izicelo zomsebenzi, iijenali, amanqaku, njl.njl iingxaki ezahlukeneyo ngebhokisi lakho leposi okanye iifolda ezingaxhunyiwe kwi-intanethiUmzekelo, iseva yoTshintshiselwano iyaphazamiseka okanye awukwazi ukulungelelanisa uhlaziyo olungaxhunyiwe kwi-intanethi neseva, sicebisa ukuba usebenzise DataNumen Exchange Recovery ukubuyisa yonke idatha ekuyo.
IMicrosoft Outlook 2002 kunye neenguqulelo zangaphambili zisebenzisa endala OST ifomathi yefayile enomda wobungakanani befayile eyi-2GB. The OST ifayile iya konakala xa ifikelela okanye idlula i-2GB. Ungayisebenzisa DataNumen Exchange Recovery ukuskena ngaphezulu OST ifayile kunye uyiguqulele kwifayile ye-PST kwifomathi ye-Outlook 2003 engenasithintelo kubungakanani befayile eyi-2GB, okanye Yahlulahlule kwiifayile ze-PST ezininzi ezincinci kune-2GB ukuba awunayo i-Outlook 2003 okanye iinguqulelo eziphezulu ezifakiweyo.